राशी अनुसार यौन चाहना , तपाइको कस्तो ? – Ekathmandunepal
Homeजीबन शैलीराशी अनुसार यौन चाहना , तपाइको कस्तो ?
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:०२ ekathmandu Nepal जीबन शैली 0
हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भने कोही अमिलो वा नुनिलोको । मानिसलाई स्वस्थ रहन यौन जीवनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानसिक र शारिरीक रुपमा स्वस्थ रहन पनि यौन जीवन आवश्यक हुने मनोपरामर्शदाताहरु बताउँछन् ।
यसैगरी यौनको मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र व्यवहार हुन्छ । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका । कुनै जोडीलाई कामुक कुराकानी मन पर्छ भने कसैलाई एक अर्कालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ । यौन जीनवमा स्वास्थ्यको महत्व जस्तै ज्योषिशास्त्रका अनुसार पनि यौनिक व्यवहार फरक हुनको कारण राशी हो ।
अब सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले होइन, चालकले नै ट्राफिक प्रहरी खोज्नु पर्ने दिन आए
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (551)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (548)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (452)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (450)
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक… (285)
यस्तो सपना देखेमा तपाईंको मृत्‍यु छिट्टै हुदैछ भन्ने… (154)
यी ३२ गुण जो पुरुषमा हुन्छ त्यो पुरुष महापुरुष हुन्छ… (140)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (1,005)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (861)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (746)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (667)
यसरी भयो युएस बंगला बिमान दुर्घटना :विमानस्थल… (640)